DHAGEYSO:Guddoomiyaha Nairobi oo ballanqaaday in la xallinayo cabashooyinka kalkaaliyayaasha – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO:Guddoomiyaha Nairobi oo ballanqaaday in la xallinayo cabashooyinka kalkaaliyayaasha
Star FM February 12, 2019
Barasaabka caasimadda dalka ee Nairobi Mike Sonko ayaa shaaca ka qaaday in la soo afjari doono gadoodka shaqo ee ay ku dhaqaqeen kalkaaliyayaasha ka howlgalo isbitaalada dowladda ee ku yaallo magaala madaxda wadanka.
Mike Sonko ayaa hoosta ka xariiqay inuu ballanqaad la oofin doono u sameynayo kalkaaliyaasha dalbanaya in mushaar kordhin loo sameeyo sido kalena loogu daro lacagaha gunnooyinka ee ay qaataan ee ku aaddan labiska shaqo iyo adeegga ay bulshada u hayaan.
Waxaa uu intaasi ku daray inay akoontiga ismaamulka Nairobi ku jirto lacag ku filan kalkaaliyaasha oo la siin karo.
Mike Sonko ayaa saraakiisha shaqa joojinta sameeyay uga mahadceliyay inaynan wax rabasho ah sameynin.
Sido kale Mike Sonko ayaa carrabka ku adkeeyay inuu si weyn ula dagaalamayo musuqmaasuqa oo uunan doonayn in wax khilaaf ah uu kala dhexeyo shaqaalaha daacadda ah.
Kalkaaliyayaasha ayuu u sheegay inay leeyihiin xaq dastuuri oo ay shaqa joojin sameyn karaan hadii ay jiraan waxyaabo ay tabanayaan sidaasi awgeedna aanan la ciqaabi doonin.
Guddoomiyaha oo ballanqaaday in kalkaaliyayaasha la siinayo lacagaha ay doonayaan ka hor dhammaadka bishan ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa ……
Barasaabka ismaamulka Nairobi Mike Sonko ayaa shacabka ku nool deegaanada kala duwan ugu baaqay inay si weyn uga qeybqaataan geedisocodka miisaaniyad sannadeedka.
Mike Sonko ayaa muddo hal toddobaad ah ugu talagalay in dadweynaha ku nool Nairobi wax laga weydiiyo miisaaniyadda lagu maareynayo howlaha maamul goboleedka.
Waxaa uu hoosta ka xariiqay in tallaabadan ay tahay mid looga gol leeyahay inay jirto daahfurnaan ku aaddan isticmaalka dhaqaalaha.
Kulamo kala duwan ayaa la qorsheynaya in lagu qabto dhammaan 17-ka degaan baarlamaneed ee ay Nairobi ka koobantahay meelaha ay shirarkan ka dhacayaan waxaa ka mid ah Eastleigh Social Hall.
Dhanka kale wasiirka wasaaradda shaqaalaha iyo badbaadinta bulshada ee dalka Mr. Ukur Yatani ayaa kalkaaliyayaasha wadanka ka codsaday inay soo afjaraan shaqa joojinta ay ku guda jiraan.
Waxaa uu u soo jeediyay inay tixgeliyaan kulamada dhexdhexaadinta ee socdo fursadna ay siiyaan wada hadalada xal loogu raadinayo arrimaha ay tabanayaan.
Bayaan uu soo saaray ayuu wasiirku ku sheegay in howlwadeenada caafimaadka ay iska dhaga tireen amar maxkamadda ka soo baxay 5-tii bishan labaad.
Waxaa uu amarkaasi ahaa mid muddo 60 cisho ah lagu hakiyay shaqa joojinta ay ku dhaqaqeen 4-tii Febraayo.
Sido kale Ukur Yattani ayaa bayaanka ku sheegay inuu rajeynayay in xubnaha ururka qaran ee kalkaaliyayaasha ee KNUN ay u hoggaansamaan amarka maxkamadda.
Wasiirka ayaa intaasi ku daray in shaqa joojinta saraakiishan ay saameyn ku yeelatay bixinta adeegyada caafimaad ee isbitaalada dowladda sido kalena ay caqabad ku noqotay geedisocodka dhexdhexaadinta.
Kalkaaliyayaasha ismaamulka Nyeri ayaa lagu soo warramaya inay soo afjareen shaqa joojintii ay ku guda jireen kaddib markii heshiis ay la galeen dowladda maamul goboleedkaasi.
Hal maalin ka hor ayay ahayd markii barasaabka Nyeri ,Mutahi Kahiga uu ku goodiyay inuu shaqada ka ceyrinayo howlwadeenada hadii aynan dib ugu laaban goobahoodi shaqo.
Xoghayaha ururka qaran ee kalkaaliyayaasha dalka ee (KNUN) laantiisa Nyeri ,Beatrice Nduati ayaa sheegtay inay saraakiisha dhammaan berri oo arbaco ah iska xaadirinayaan isbitaaladii ay ka shaqeynayeen.
← Maxkamadda ugu sarreysa dalka oo kiiska guddoomiyaha Wajeer go’aamin doonto Jimcada
Guddiga TSC oo soo saaray amar cusub →